Mbola Rajaonah : Manelingelina ny mpanohitra -
AccueilRaharaham-pirenenaMbola Rajaonah : Manelingelina ny mpanohitra
Niampanga ny mpanolotsainan’ny Filoha, Mbola Rajaonah ho manodidina ilay fanondranana « bois de rose » tany Singapour ny gazety La Vérité sy ny Freenews, ary nilaza mihitsy fa ity mpanolotsaina ity no tompon’andraikitra tamin’izany fanondranana harem-pirenena izany. Izany hoe, tokony ho tany amin’ny kaontin’ i Mbola Rajaonah (na an-tanindrazana izany, na any ivelany) no nivantanan’ilay 50 tapitrisa dolara (manodidina ny 750 miliara) vidin’ireo andramena milanja 30.000 T ireo.
Novoizina tany amin’ny facebook sy ny gazety La Vérité, ary ny fahitalavitra VIVA tamin’iny herinandro lasa iny ny famoahana ireo fiara nolazaina fa an’ny mpanolotsaina Mbola Rajaonah. Nazava hatrany am-boalohany fa nisy paikady sy tetika maloto nofonosina tamin’ny fivoizana izany tany amin’ireo hainoamanjery sy ny tambazotra. Ny zavatra azo antoka aloha dia ny hoe fanomanana ara-tsaina ny vahoaka fa hisy resaka hivoaka tsy ho ela mifandraika amin’ireo fiara voalaza fa an’ity mpanolotsaina ity ireo, ary efa nambaran’i Andry Andriantongarivo izay merseneran’i Mamy Ravatomanga sy Lalatiana Rakotondrazafy tany amin’ny facebook rahateo ny hoe « miomana fa misy dosie momba an’i Mbola Rajaonah hivoaka… ».
Inona tokoa no nitranga, ary tsy niandry ela fa navoakan’ny La Vérité sy ny Freenews lohateny vaventy ny hoe : « Mbola Rajaonah no tompon’andraikitra tamin’ny fanondranana ireo andramena miisa 30 000 mitentina any amin’ny 750 miliara tany Singapour ». Nazava tanteraka amin’izany resaka nanomboka teo, izany hoe, novoizina aloha fa manana fiara raitra ny mpanolotsaina Mbola Rajaonah mba hanomanana ny sain’ny vahoaka amin’ireto zavatra manaraka ireto : voalohany, dia ny handresen-dahatra ny vahoaka hino tanteraka fa ity mpanolotsaina ity marina tokoa no nanondrana ireo « bois de rose » mitentina 750 miliara tany Singapour matoa manana ireo fiarakodia voalaza fa lafo vidy ireo. Faharoa, dia ny hitaomana an-kolaka ny vahoaka mba hanasokajy ity mpanolotsaina ity ho fahavalom-bahoaka tahaka ireny fahavalom-pirenena rehetra nahavita heloka be vava ireny.
Ny gazety Triatra sy La Ligne de Mire no voalohany niresaka ity raharaha Singapour ity sy nilaza fa mpandraharaha tsy refesi-mandidy nandritra ny fitondrana HAT no atidoha nikotrika ny fanondranana ireo « bois de rose » miisa 30 000 tany Singapour ireo. Ny fanontaniana mipetraka eto dia ny hoe: « nivantana tany amin’ny kaontin’iza àry ny vola be 50 tapitrisa dolara (eo amin’ny 750 miliara vola gasy eo) vidin’ireo andramena ireto? ». Efa voaloa vola mantsy izy ireo ary hanaiky izany ilay mpandraharaha tany Singapour. Fa taiza no nisy afera amina miliara be tahaka izany ka tsy nandalo teo ambany mason’ny mpitondra Tetezamita? Nisy afaka nandingana teo amin’izany Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga izany ve raha vao resaka “bizna” sy ny afera, indrindra hoe an-jatony miliara, nandritra iny fitondrana HAT iny?
Sarotra ny hino fa nisy olona nahavita nanao “bizna” an-jatony miliara, ka tsy nahazo ny fankatoavan-dRajoelina sy Ravatomanga nandritra iny Tetezamita iny ary izay indrindra no hisarihana ireo rafitra mpanara-maso rehetra eto amin’ny firenena mba hamoaka ho fanta-bahoaka ny kaonty nivantanan’ny vola be 750 miliara vidin’ireo “bois de rose” miisa 30 000 tratra tatsy Singapour ireo.
Fa misy inona hitranga indray àry atsy ho atsy? Mipetraka tokoa izany fanontaniana izany manoloana ny fiampangana nataon’ny La Vérité sy Freenews ny mpanolotsaina Mbola Rajaonah ho tompon’andraikitra tamin’ny fanondranana ireo “bois de rose” ireo tany Singapour. Tahaka izao ihany mantsy no nataon’izy ireo tamin’ny fotoana nisavan’ny SAMIFIN sy ny Fampanoavana ny orinasa SODIAT teny Borosy Talatamaty sy ny tranon’i Mamy Ravatomanga teny Amboaroy Ivato, araka ny fifanaraham-piaraha-miasa amin’ny Fitsarana ao Parisy ny datin’ny 22 Jona 2017 sy ny fanomezan-dalana nomen’ny Lehiben’ny Fampanoavana ny faha-07 aogositra 2017. Mamy Ravatomanga izao no nanao sonia izany taratasy misava ny tranony sy ny orinasany izany teo anatrehan’ny tale jeneralin’ny SAMIFIN, Lamina Boto Tsaradia sy ny Lehiben’ny Fampanoavana kanefa dia mbola novoizin’ireo hainoamanjery mpiara-dia aminy hoe mandainga ny gazety nitatitra izany vaovao izany.
Mitovy amin’izany ihany koa ity raharaha Singapour ity. Izany hoe, voizin’izy ireo mialohan’ny hivoahan’ny tena marina mba hisian’ny fisavorovoron-kevitra. Tsy ny resaka “bois de rose” tany Singapour na ny raharaha mahazo an’i Mamy Ravatomanga atsy Parisy fotsiny ihany, fa hatramin’ireny zava-doza nitranga tany Anjozorobe nandotoana ny zanaky ny filoha, sns. Fomba fiady nampiasan’izy ireo nandritra ny fifandonana tamin’i Marc Ravalomanana ny taona 2009 ihany moa izany, saingy tsy nahaleo tosika azy ireo moa ny seraseran’ity filoha teo aloha ity dia ireny niaraha-nahita ireny ny zava-nitranga teto amin’ny firenena.
Fotodrafitrasa vaventy, ary fotodrafitrasa fototra maro no vitan’ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina: lalana, sekoly, toeram-pitsaboana, barazy, tetezana, fanarenana ny JIRAMA, fampidirana ireo mpampianatra FRAM miisa 40 000 ho mpiasam-panjakana, famerenana ny fitokisan’izao tontolo izao an’i Madagasikara, fanafoanana ny sazy, fandraisana ireo fivoriambe iraisam-pirenena maro toa ny COMESA sy ny Frankofonia, ny CBI tany Parisy, ny famahana ny kere tany Atsimo, ny famatsiam-bola maro avy any ivelany, sns. Noezahan’ny hainoamanjerin’ny mpanohitra ny nanafina izany zava-bita rehetra izany, ankoatra ny fanelezana tsaho maro samihafa raha tsy hilaza afa-tsy ny hoe “tsy ho tanteraka ny Frankofonia, tsy hisy fahombiazana ny CBI, sns”. Fa niala maina noho ny fisian’ny rafitra natsangan’ity mpanolontsaina ity izay tsy nitsahatra nivoy sy nampita ny vaovao marina tamin’ny vahoaka manoloana ny ezaky ny filoha Hery Rajaonarimampianina, na teto an-tanindrazana izany, na tany ivelany. Nahafantatra ny ezaka sy ny fikelezana aina nataon’ny filoha ny vahoaka, ary afaka nanavaka ny vaovao tena marina manodidina raharaham-pirenena.
Mifandraika indrindra amin’izay resaka serasera izay ihany anefa ny tohin’ny resaka. Ny mpanolotsaina Mbola Rajaonah no tompon’ny vondrona RLM Communication misy ny gazety Triatra, La Ligne de Mire, La Dépêche, On Air Radio, AZ Radio, AZ TV, Akon’i Madagasikara, Le Citoyen, izay mpomba ary mpanohana ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina. Tsy nikosi-maso niatrika ny ady ara-tserasera tamin’ny hainoamanjerin’ny mpanohitra mihitsy ity vondrona ity, na dia noezahina tamin’ny fomba maro aza nandotoana ireo mpitantana tamin’ny alalan’ny facebook sy ny tambazotra, ary ny hainoamanjery mihitsy aza. Noho izany, manelingelina ny avy amin’i Marc Ravalomanana sy ny TIM, Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga, Hajo Andrianainarivelo, MAPAR ny fisian’ireo rafitra misahana ny filazam-baovao an’ity mpanolontsaina ity. Manelingelina satria nanjaka tokana tokoa ny hainoamanjerin’ny mpanohitra sy ny fivoizana hevitra teto teo anelanelan’ny taona 2014-2016. Efa nisioka mihitsy ny avy tamin’ny fanoherana nandritra izany fe-potoana izany fa hirodana tsy ho ela ny fitondrana, ary tsy hananosarotra azy ireo ny fitaomana ny olona hidina an-dalambe noho izy ireo nanjaka tokana teo amin’izay sehatry ny hainoamanjery sy ny filazam-baovao izay.